प्रचण्डसँग छुट्टिएका नेता भीम रावल भन्छन् : ” केपी ओली हाम्रो सम्मा’नित अध्यक्ष हुनु’हुन्छ , अब हामी मिलेर एमाले’लाई बलियो बना’उँछौं ।” – Sadhaiko Khabar
प्रचण्डसँग छुट्टिएका नेता भीम रावल भन्छन् : ” केपी ओली हाम्रो सम्मा’नित अध्यक्ष हुनु’हुन्छ , अब हामी मिलेर एमाले’लाई बलियो बना’उँछौं ।”
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २५, २०७७ समय: २०:५३:५१
काठमाडौं/ सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीम बहादुर रावलले सर्वोच्च अदालतले माग नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर नेकपाको विषयमा फैसला गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
मंगलबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता रावलले यस्तो बताएका हुन् । आफूहरु एमालेमा फर्किएको सुनाउँदै उनले अब पार्टीलाई एकदम बलियो बनाउने पनि सुनाए । प्रस्तुत छ रावलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यो कुनै व्यक्तिगत मामला थिएन । यो राजनीतिक विधि, पद्धती, प्रणाली, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको एउटा अन्तरसंघर्ष थियो । पार्टीमा उहाँप्रति मेरो व्यक्तिगत ईष्र्या भाव, द्धेष आदि केही पनि थिएन ।
अब सर्वोच्च अदालतले यो जुन फैसला राजनीतिक रूपमा गर्यो, हामीले त्यसप्रति असहमति त जनाई नै सकेका छौँ । किनभने माग गर्दै नगरेको कुरामा प्रवेश गरेर फैसला गर्यो । तर, त्यो गरेपनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्छौं । र नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा रहनेछ भनेर फैसला गरेपछि अब तत्कालिन् नेकपा एमालेको नवौं महाअधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र अन्य नेताहरू, हामीहरू सबै अब एकठाउँमा हुन्छौँ ।
नेकपा एमालेलाई एकदम बलियो बनाउँछौँ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता, हाम्रो आफनो यो देशको अधिकारमाथि आघात पुर्याउने बाहृय तथा आन्तरिक सम्पुर्ण षड्यन्त्रलाई हामीले अब विफल पार्छौं ।
तपाईँले भन्नुभएको थियो–केपी ओलीलाई मैले कहिल्यैपनि स्विकार्दिन । उहाँ निरंकुश तानासाहा हो, र हामी गलत निर्णयको विरोध गछौ भन्नुभएको होइन ?
तपाईलाई म स्मरण गराउँछु । जुन-जुन निर्णयहरूमा मैले भनेजस्ता व्यवहारहरु देखिए, जुन-जुन निर्णयहरू पार्टीको विधिसम्मत देखिएनन् । त्यहाँ-त्यहाँ मैले त्यो प्रश्र उठाएको थिएँ । र अहिलेपनि म भन्छु । उहाँ नेकपाको नवौं महाअधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
म पनि त्यही महाअधिवेशनबाट अत्यधिक मतले निर्वाचित उपाध्यक्ष थिएँ । उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा, म उपप्रधानमन्त्री भएको थिएँ । त्यसकारण उहाँ र मेरो लामो समय संगत भएको कुरापनि तपाईँ स्मरण गनुहोस् ।
कुरा के मात्रै थियो भने कतिपय विषयहरूमा हाम्रा मत–मतान्तर थिए । र त्यो मतमतान्तर तर चर्किदै यतिसम्म पुगेको थियो भने जहाँ तपाईले भनेका जस्ता शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले फेरि नेकपा एमाले यथावत रहन्छ भनेपछि त हामी अब एक ठाउँमा जान्छौँ ।
तपाईँले जे शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो शब्द अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति, सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्मत छैन । यहाँ भीम रावलको मात्रै प्रश्र छ र ? तत्कालिन् नेकपा एमालेबाट निर्वाचित संख्या हेर्नुहोस न ।
संघको संख्या हेर्नुहोस् । प्रदेशको संख्या हेर्नुहोस् । जनसंगठनको हेर्नुहोस के छ ? भीम रावलको मात्रै प्रश्र हो यो ? नेकपा एमालेलाई सर्वोच्च अदालतले राजनीतिमा प्रवेश गरेर यस्तो काम गरिसकेपछि । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसरि जोगाउने ? व्यक्ति भनेको अजर अमर छ र यो दुनियाँमा ? छैन नि ।
त्यसकारणले यहाँ कुनै व्यक्तिप्रतिको विरोध र समर्थन होईन । यहाँ प्रश्र के हो भने ? सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई एकै ठाउँमा राखेपछि हामी सबै यथावतमा आयौं ।
५४७ पटक हेरिएको